Bouanay Djakah waa dherer dhaqameed oo wacyigelin ah iyada oo loo marayo sheekooyinka iyo maahmaahda, hantida dhaqameed ee ay awowayaashu Afrikaan yihiin.
Kaca Madow, sida Libaaxyada Mandingo, Soundiata Kéita: Ninkii Madow waa inuu ku faano marka dadka kale dhaleeceeyaan oo ula macaamilaan wax aan ka yarayn ... (VIDEO)
Posted By: Bouanay Djakahwaa: July 7, 2018 4: 00 No Comments
Waa inaad naftaada caawisaa, sida Soundiata Kéita, waqtigeedii ayay sameysay, ka dib dulintii ugu dambeysay ee hooyadeed haysatay. Aynu joojino dulmiga nafteenna oo aan kacno! Akhri wax dheeraad ah
"Waxaan dhihi, Bouanay wuxuu yiri" Aan iska ilaalinno miraha kala qaybinta: Inta badan dadka aan aqoonta lahayn ee wadamada Afrika waxaan u ogolaaneynaa inay xakameeyaan siyaasiyiinta ... (VIDEO)
Posted By: Bouanay Djakahwaa: July 6, 2018 2: 55 No Comments
Yaa ka mid ah awoodda aan xusuusto codkooda ... Siyaasadda, diinta, farshaxanka qabaa'ilka waa nasiib darro xasaasiyadeed oo kala duwan. Akhri wax dheeraad ah
Munaasabada MAMA AFRICA, David Diop oo Senegal iyo Pierre-Claver Akendengué ee Gabon ... (VIDEO)
Posted By: Bouanay Djakahwaa: July 5, 2018 3: 40 No Comments
Afrikaankeena ayaa u qalma qadarinteenna. Caruurteeda sida Pierre Akendengué iyo David Diop si sharaf leh ayey u maamuuseen. Waxaan codkayga ugu biirayaa kuwa caruurtan tusaalayaasha ah ee muujiya jacaylkayga ... Akhri wax dheeraad ah
Gabadh Afrikaan ah, naftaada ku faana: maanta, dumarka Afrikaanka ahi waxay buunbuuniyaan waxyaabo farshaxanimo ku filan oo ay iskood isu qurxiyaan: (VIDEO)
Posted By: Bouanay Djakahwaa: July 4, 2018 9: 40 No Comments
Timaha beenta, ciddiyaha beenta ah, isbadalada beenta ah, dabada beenta. Intee in la eg ayey aadayaan? Ma yihiin kuwo aad iyo aad u tiro badan oo aan dabiici ahayn iyo kuwo aan caadi ahayn? Bouanay Djakah wuxuu ahaa martida gaarka ah ee ... Akhri wax dheeraad ah
Sheeko loogu talagalay adiga, gacaliyahayga Ivory Coast: dadka ku nool dalalkeenna Afrika badankood way dagaallamayaan, oo midba midka kale wuu burburayaa, siyaasaddana wuu u qaybsanayaa ... (VIDEO)
Posted By: Bouanay Djakahwaa: July 1, 2018 9: 21 No Comments
Waxaa la joogaa waqtigii ay xulufadeenu fahmi lahaayeen in siyaasiyiintu yihiin kuwa cadow ah oo aan ahayn cadawga dhimanaya. U oggolow inay fahmaan in siyaasiyiintu u isticmaalaan sida ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: Bouanay Djakahwaa: Juun 29, 2018 9: 27 1 Comment
Mucaaradka dalalkeenna Afrika waxaay mar walba ku baxaan saf kala firidhsan, oo ay wiiqeyso dhibaatooyinka dadka, iyo halganka meeleynta. Xaaladda waxay ka dhigeysaa mid daciif ah oo jilicsan ... Akhri wax dheeraad ah
Golaha Qaranka ee Libreville ayaa dab la qabadsiiyay kadib doorashadii Cali Bongo ee Gabon
Waajibka ah in la xasuusto: Serge Kubla oo reer Beljim ah wuxuu siiyay lacag dhan € 20.000 naagtiisa Muzito, Chantal Muzito "Lacagtaan waa in loo adeegsadaa hormar loogu sameeyo wadarta guud ee € 500.000 oo lagu heshiiyay wasiirkii hore Walloon iyo Muzito" ... ( VIDEO)
Feb16 08: 46